Soshiki Karate 組織 空手 (松濤館) ကရာတေး: ကမ္ဘာ့ တပ်မတော် ကရာတေး Combative Training သင်တန်းများ နှင့် Powerful Combat Karate by Karate Myint Kywe မြို့မ မြင့်ကြွယ် ( Myoma Myint Kywe )
ကမ္ဘာ့ တပ်မတော် ကရာတေး Combative Training သင်တန်းများ နှင့် Powerful Combat Karate
ကရာတေး 空手 (empty hand) လက်နက်မဲ့ ခုခံကာကွယ်ခြင်း
မှာ မိမိအနေဖြင့် တိုက်ခိုက်သူ၏ မမျှော်လင့်နိုင်သော တိုက်ခိုက်မှုကို ရုတ်တရက် လျှင်မြန်စွာ ရှောင်တိမ်းကာ ၄င်းတိုက်ခိုက်သူအား မိမိကို ဆက်လက်မတိုက်ခိုက်နိုင်စေရန် ချက်ချင်း ပြန်လည် ခုခံထိန်းချုပ် ကာကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ street fight နှင့် ground fight များတွင် ထိရောက်စွာ အသုံးဝင်သည်။
ဂျပန် ဘာသာ စကားလုံးကို မြန်မာအသံထွက်ဖြင့် ခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်း ဂျပန်ဘာသာ အသံထွက်အတိုင်းရေးပါက ခါရာ့တဲ (or) ကရာတေး ဟု လည်း ရေးသားနိုင်ပါသည်။ စကားလုံးတစ်လုံးစီ ကို ဘာသာပြန်ကြည့်ပါက-
ကရာ မှာ 空 Empty "ဗလာ" ဖြစ်၍၊
တေး မှာ 手 Hand "လက်" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
COMBAT Karate (REAL Karate) ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာတတ်လျှင် မိမိထက် အင်အားဗလ သာသည်လည်းဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသည်လည်းဖြစ်စေ၊ တယောက်ထက်များသည့် ရန်သူကိုလည်းဖြစ်စေ ကောင်းစွာ ခုခံကာကွယ်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။
ကရာ (Kara)သည် သတ္တဝါအားလုံးအား အကြမ်းမဖက်ရေးနှင့် သုညတ ဝါဒ Sunyata 空 (仏教) တရား လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ သုညတ Sunyata (or) emptiness သည် အလုံးစုံ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မရှိသော အေးငြိမ်းချမ်းသာခြင်း ၊ တဏှာမရှိခြင်း ၊ တဏှာမှ ကင်းလွတ်ခြင်း ၊ ဒုက္ခမှ အပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ခြင်း ၊ စွန့်လွတ်ခြင်း ၊ လွတ်မြောက်ခြင်း ၊ မကပ်ငြိခြင်း ၊ ပူဆွေးမှု မရှိခြင်း ၊ ငို​ကြွေးမှုမရှိခြင်း ၊သောကမရှိခြင်း ၊ အညစ်အကြေး ကိလေသာ မရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဥရောပနိုင်ငံများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ ကျွန်တော်ရောက်ရှိစဉ် Army combative training တပ်မတော် တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းများ၊ Close Quarter Combat (CQC) Training and Army commando training သင်တန်းများ၊ Police combative training and Police commando training ရဲတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းများ၊ REAL karate ကရာတေးသင်တန်းများ၊ Combat karate ကရာတေးသင်တန်းများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် hand-to-hand Combat training တိုက်ခိုက်ရေးကိုယ်ခံပညာ (Combative training and powerful Combat karateအဖြစ်ကရာတေးလေ့ကျင့်သင်ယူနေကြသည်ကို နေရာအနှံ့
အပြားတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ Sport Karate သည် ကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပါဝင်သော်လည်း တပ်မတော်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့များတွင်သင်ယူလေ့ကျင့်နေသူများအနည်းငယ်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
Sport Karate သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ တပ်မတော်တိုက်ခိုက်ရေးသင်တန်းများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းများ၊ special ကွန်မန်ဒို သင်တန်းများ၌် Combative Karate (Combat Karate) လောက် popular မဖြစ်ရခြင်းမှာ ယနေ့ sport karate အများစုသည် dancing & bouncing သဘောမျိုး၊ အလှသဘောမျိုးသာဖြစ်နေကြောင်း၊ street fight နှင့် ground fight များတွင် လက်တွေ့အသုံးမဝင်ကြောင်း၊ စွမ်းအားထက်မြက်သော ကရာတေးနည်းစနစ်များ (Powerful techniques) နှင့် ထိရောက်သော တိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်များ (effective combat trainings) ကို လစ်လျူရှုနေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အနောက်နိုင်ငံများတွင် sport karate ကို သင်ယူလေ့ကျင့်သူနည်းပါးရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်
သို့ရာတွင် sport karate (karate-do) ဖြစ်စေ၊ combative karate ဖြစ်စေ၊ traditional karate ဖြစ်စေ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့အတူ အသုံးဝင်ကြပါသည်။ sport karate (karate-do) ဆိုလျှင် အားကစားကို အထူးသဖြင့် ဦးစားပေးပြီး ထိရောက်သော powerful combative techniques ကို ဦးစားမပေးပါ။ combat karate (karate) ဆိုလျှင် အားကစားအတွက်သာမက ထိရောက်သော powerful techniques များပါ ပါဝင်သည့်အပြင် manners and ethics, humble, forgiveness, patient စသော လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပါဝင်ကြောင်း သတိပြုမိသည်။
ကရာတေး (karate 空手) နှင့် ကရာတေးဒို (karate-do 空手道) အတူတူပဲလားဟူ၍ နိုင်ငံခြားသားတစ်ချို့က မေးမြန်းခဲ့ဖူးပါသည်။ ကရာတေး (karate 空手) နှင့် ကရာတေးဒို (karate-do 空手道) နှစ်မျိုးစလုံးသည် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူ ကောင်းမွန်ကြပါသည်။ "Sport karate" ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ "Karate-do" ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်မှန်သော နည်းစနစ်များ၊ အခြေခံယဉ်ကျေးမှု လူ့တန်ဖိုးများ ပါဝင်ဖို့တော့လိုသည်။ ထိုနည်းတူ "Combative karate" လို့ပဲပြောပြော၊ "Real karate" လို့ပဲပြောပြော၊ Originated karate လို့ပဲပြောပြော စစ်မှန်သောနည်းစနစ်များ၊ အစွမ်းထက်သောပညာများ၊ အခြေခံယဉ်ကျေးမှု လူ့တန်ဖိုးများ ပါဝင်ဖို့လိုသည်။ အကယ်၍ စစ်မှန်သောနည်းစနစ်များ၊ အစွမ်းထက်သော ပညာရပ်၊ ယဉ်ကျေးမှုလူ့တန်ဖိုးများ မပါဝင်သော မည်သည့် karate (ကရာတေး) ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် karate-do (ကရာတေးဒို) ဖြစ်စေ တင့်တယ်ကောင်းမွန်မည် မဟုတ်ချေ။ ကရာတေးပညာ၏ မူလဝေါဟာရ kara ဆိုသောစကားရပ်သည် ဗလာ (emptiness) လက်နက်မဲ့ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ထို့အပြင် လေ့ကျင့်သူကရာတေးသမား၏ တွေးခေါ်မျှော်မြင်ချက် စိတ်ဓာတ်တွင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန၊ အဃာတ စသော မကောင်းမှုများ မပါဝင်ခြင်း၊ (မရှိခြင်း မရှိအောင်လုပ်ခြင်း) ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ရည်ရွယ်ချက် သဘောထားများပါ ပါဝင်သည်။
ကရာတေးဒို ဆိုသည်မှာ နောက်ပိုင်းကာလမှ ဖြည့်စွက်ခေါ်ဝေါ်သော အမည်နာမတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် (World Karate Federation) ဟူ၍သာရှိပါသည်။ World Karate-do Federation ဟူ၍ ဘယ်သောအခါမှ မရှိခဲ့ချေ။ ထိုနည်းတူ modern karate ၏ ဖခင်ကြီးဟူ၍ ခေါ်တွင်ခြင်းခံသော ဆရာကြီး Funakoshi Gichin ကိုယ်တိုင် နှင့် သူ၏တပည့်ဖြစ်သူ နာမည်ကျော်ကရာတေးဆရာကြီး Masatoshi Nakayama တို့ကိုယ်တိုင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ဂျပန်ကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် (Japan Karate Association) ဟူသော အမည်ကို သာဓကထား၍ လေ့လာကြည့်ပါက "do" ဟူသော ဝေါဟာရကို မူလနှစ်ပေါင်းများစွာမှပင် ယနေ့တိုင် သုံးစွဲခြင်းမရှိ၊ ပါဝင်ခြင်းမရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်ကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် (Japan Karate Association) ဟူ၍သာရှိပါသည်။ Japan Karate-do Association ဟူ၍ ဘယ်သောအခါမှ မရှိခဲ့ချေ။
သို့ရာတွင် ကရာတေးဒိုဟူ၍ အချို့သော ကရာတေးအသင်းများက နောက်ပိုင်းကာလတွင် သုံးစွဲလာကြသည်ကို သတိပြုမိပါသည်။ "ဒို (do)" ဟူသည့်အဓိပ္ပာယ်မှာ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် 道 လမ်း /လမ်းကြောင်း (road/way) ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ကရာတေးတွင် "ဒို" ဟူသော ဝေါဟာရ ဖြည့်စွက်ကာ ကရာတေးဒို ဟူ၍ သုံးစွဲသူများကိုလည်း မှားယွင်းသည်ဟု ပြောဆို၍ မရသော်လည်း မူလတည်ထောင်သူဆရာကြီးတို့၏ စကားရပ်နှင့်မူလွဲချော်နေကြောင်း သတိပြုမိသည်။ sport karate (karate-do) ဖြစ်စေ၊ real combative karate ဖြစ်စေ၊ traditional karate ဖြစ်စေ အခြေခံ basic (kihon)၊ နည်းစနစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောပုံစံ pattern or form (kata)၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း (သို့) တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း sparring or free fighting (kumite) များကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူလေ့ကျင့်မှု မပါဝင်လျှင် (မရှိလျှင်) ထို ကရာတေးသည် တန်ဖိုးရှိသင့်သလောက်ရှိမည်မဟုတ်ချေ။ အထူးသဖြင့် ရန်လိုခြင်း၊ မာနကြီးခြင်း၊ နှိမ့်ချမှုမရှိပဲ မောက်မာလွန်းခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းခြင်း စသော လုပ်ရပ်များကို လုပ်နေပါက ကရာတေးပညာရပ်အတွက်တန်ဖိုးမရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်လူအများ၏ အထင်သေး အမြင်သေး ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ရပ်ကွက်မှာဖြစ်စေ၊ လမ်းမှာဖြစ်စေ၊ ကျောင်းမှာဖြစ်စေ လူတစ်ချို့က ကရာတေးနှင့်ပတ်သက်၍ စော်ကားမော်ကား နောက်ပြောင်သရော်တတ်သည်ကို သတိပြုမိသည်။ တစ်ချို့ ကတော့ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ခင်မင်လို့ နောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ လူကို ရန်စချင်သည့်သဘော၊ စော်ကားချင်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ- “မင်းသိုင်းတတ်တယ် ဟုတ်လား။ မင်း ကရာတေးတတ်တယ် ဟုတ်လား။ ကွန်ဖူး/ တိုက်ကွမ်ဒို တတ်တယ်ဆိုရင် မင်းကိုငါ ဓားနဲ့ ထိုးကြည့်မယ်၊ ခုတ်ကြည့်မယ်။ မင်းရှောင်နိုင် မလား။ ရှောင်နိုင်တယ်ဆိုရင် အခု ငါခုတ်လိုက်မယ်၊ ဓားသွားယူလိုက်ဦးမယ်။ အုတ်နီခဲနဲ့ ထုမယ်။ မင်းရှောင်နိုင်မလား။” …. ဟူ၍ တစ်မျိုး၊ “မင်းကို ငါတုတ်နဲ့ရိုက်တာကို၊ ဓားနဲ့ခုတ် တာကို မင်းရှောင်နိုင်တယ်၊ ခုခံနိုင်တယ် ထားဦး၊ မင်းကိုငါ သေနတ်
နဲ့ ပစ်သတ်မယ်ကွာ၊ အမြှောက်နဲ့ ပစ်မယ်၊ လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ပစ်မယ်ဆိုရင် မင်းကျည်ဆံ၊ လက်ပစ်ဗုံးတို့ကိုတော့
ရှောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းသုံးထပ်တိုက်ပေါ်ကနေ မခုန်ချရဲပါဘူး။ မင်းခုန်ချရဲတယ် ဆိုရင် အခုချက်ချင်း ခုန်ချပြလေ။” ….. ဟူ၍ တစ်ဖုံ စသည်ဖြင့် နောက်ပြောင်သလိုလို၊ ရန်စသလိုလို ရန်စကား ပြောဆိုလေ့ရှိပါသည်။
နည်းစနစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောပုံစံ KATA တွင်လေ့ကျင့်ခြင်း၌ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့၏ လှုပ်ရှားခြင်းသည် ညီညွတ်စေရန် အရေးကြီးသည်။ ယင်းညီညွတ်မှုကို ရရှိနိုင်ရန် စည်းချက် ဝါးချက်ရှိဖို့ rhythm, timing, speed, power, balance and sequence ညီညွတ်ရန်လိုလေသည်။ စည်းချက်ဝါးချက်ဖြင့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား ကစားခြင်းကို စည်းဝါးကိုက် kata လေ့ကျင့်ခြင်း ဟု ခေါ်သည်။ စည်းချက်ကျအောင် လှုပ်ရှားတတ်ရသည်။ ယိမ်းကရာ၌ကဲ့သို့ စနစ်တကျညီညာစွာလှုပ်ရှားတတ်ဖို့လည်း
လိုပေသည်။ မြန်လျှင် မြန်သကဲ့သို့၊ နှေးလျှင်နှေးသကဲ့သို့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါလိုက်၍ လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ရသည်။
Kata များကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူလေ့ကျင့်မှု မပါဝင်လျှင် (မရှိလျှင်) ထို ကရာတေး ဖြစ်စေ ကရာတေးဒို ဖြစ်စေ တန်ဖိုးရှိသင့်သလောက်ရှိမည်မဟုတ်ချေ။
ထိုနည်းတူ Kumite များ Powerful combative techniques and BUNKAI များကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူလေ့ကျင့်မှု မပါဝင်လျှင် (မရှိလျှင်) ထို ကရာတေး ဖြစ်စေ ကရာတေးဒို ဖြစ်စေ တန်ဖိုးရှိသင့်သလောက်ရှိမည်မဟုတ်ချေ။
ကရာတေးဒို ၏ '''Priority''' ကို Soft Karate, SPORT karate, self defence and entertainment ဟူ၍ အလွယ်ပြောဆိုလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကရာတေး ၏ '''Priority''' ကို Hard Karate, powerful COMBAT self defence, combative sport karate, and traditional
martial arts ဟူ၍ အလွယ်ပြောဆိုလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
Counter-attack or surrender!!! , do or die!!! , alive or dead!!!
Your life, dignity, soul, nationality and country in depend on your skills in karate!!!
Anatomy vital points
Master demonstrates how to defend yourself against an attacker larger and heavier than yourself by applying the principles of vital point striking. Cause your attacker some pain by attacking those weak human body areas. IMPORTANT: Please use extreme caution when practicing these moves. Remember that with the right amount of force, you can severely hurt somebody. These techniques are to be used for self-defense purposes only. All self-defense moves and tips are to be used at the risk of the user. In street survival, it is important how quickly you react inasituation.
This picture will teach you how to do the striking technique for self-defense. The striking method is demonstrated in this video so that you will avoid beingavictim of the streets. These are commonly known as pressure points. The points include the eyes, the groin, the shins, etc.
Martial artists can use this reflex with minimal effort.
U.S. Army military police at Fort Benning, Ga.,
practice hand-to-hand combat techniques.
Close combat using firearms or other distance weapons by military combatants at the tactical level is modernly referred to as close quarter battle. The U.S. Army uses the term combative to describe various military fighting systems used in hand-to-hand combat training, systems which may include modern eclectic style techniques from several different martial arts and combat sports.
Close Quarter Combat (CQC) training involves using basic, natural movement to overcome larger and better armed adversaries. This course allows foraminimal amount of training with maximum results. CQC training begins with rifles, pistols, knives, ropes, and then moves to the most advanced fighting--unarmed fighting. The objective is to insure that the student can survive zero-sum (life or death) conflicts using improvised weapons.
Counter-attack or surrender !!!!!!!!!
Do or die!!!!!!!!
Alive or dead!!!!!!!!
Surrender to Struggling!